Ukulandelwa Kwe-imeyili Namamethrikhi Okufanele Uqaphele
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 20, 2016 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
Njengoba ubheka imikhankaso yakho ye-imeyili, kunamamethrikhi amaningi okudingeka ugxile kuwo ukuthuthukisa ukusebenza kwakho konke kokumaketha kwe-imeyili. Ukuziphatha kwe-imeyili nobuchwepheshe sekuguqukile ngokuhamba kwesikhathi - ngakho-ke qiniseka ukuthi uvuselela izindlela ohlola ukusebenza kwakho kwe-imeyili. Esikhathini esedlule, sabelane nangezinye ze- amafomula ngemuva kwamamethrikhi we-imeyili angukhiye.
Ukubekwa Kwebhokisi Lemilayezo Engenayo - Ukugwema amafolda e-SPAM kanye nezihlungi ze-Junk kufanele kubhekwe uma unenani elikhulu lababhalisile (100k +). Idumela lomthumeli wakho, i- i-verbiage esetshenziswe emigqeni yakho yezihloko nomzimba womlayezo… konke lokhu kungamamethrikhi abucayi wokuqapha angavame ukunikezwa ngumhlinzeki wakho wokuthengisa we-imeyili. Abaqaphi bezinsizakalo ze-imeyili ukuhanjiswa, hhayi ukubekwa kwebhokisi lokungenayo. Ngamanye amagama, ama-imeyili akho angalethwa… kepha ngqo kusihlungi se-junk. Udinga ipulatifomu efana 250ok ukuqapha ukubekwa kwebhokisi lakho lokungenayo.
Idumela lomthumeli - Kanye nokubekwa kwebhokisi lokungenayo yidumela lomthumeli wakho. Ingabe zikhona kuhlu olumnyama? Ngabe amarekhodi abo amiswe kahle yini kubahlinzeki be-Intanethi (ISPs) ukuxhumana nokuqinisekisa ukuthi bagunyaziwe yini ukuthumela i-imeyili yakho? Lezi yizinkinga ezihlala zidinga i- ukuhanjiswa umxhumanisi ukukusiza ukusetha nokuphatha amaseva wakho noma uqinisekise insizakalo yomuntu wesithathu othumela kuyo. Uma usebenzisa umuntu wesithathu, bangaba nedumela elibi elithola ama-imeyili akho ngqo kufolda engenamsoco noma livinjelwe ngokuphelele. Abanye abantu basebenzisa i-SenderScore kulokhu, kepha ama-ISP awayiqapheli i-SenderScore yakho… i-ISP ngayinye inezindlela zayo zokuqapha idumela lakho.
Ukugcinwa Kohlu - kuthiwa kufika ku-30% wohlu ongashintsha amakheli e-imeyili ngokuhamba konyaka! Lokho kusho ukuthi ukuze uhlu lwakho luqhubeke lukhula, kufanele ugcine futhi uphromothe uhlu lwakho futhi ugcine abanye ababhalisile bakho ukuze uhlale uphilile. Bangaki ababhalisile abalahlekile ngesonto futhi ubathola ababhalisile abasha abangaki? Ngenkathi bounce rates Umkhankaso ngamunye uvame ukuhlinzekwa, ngiyamangala ukuthi ukugcinwa kohlu jikelele akuyona into eyinhloko abahlinzeka ngemisebenzi ye-imeyili! Ukugcinwa kohlu kuyimethrikhi eyisihluthulelo yokubona ikhwalithi yokuqukethwe kwe-imeyili okusabalalisa.
Imibiko yogaxekile - Bangaki ababhalisile ababike i-imeyili yakho njengengafuneki? Sethemba ukuthi akekho - kepha uma unokuthumela okungaphezu kokumbalwa ngamunye udinga ukukhathazeka ngokuthi ubatholaphi laba babhalisile kanye nokuqukethwe kokuqukethwe obathumela kona. Mhlawumbe uthumela ama-imeyili amaningi kakhulu, athengiswa kakhulu, noma uthenga uhlu… konke lokhu kungaholela kwizikhalazo eziphezulu ze-SPAM ezingagcina zikuvimbele ekuthumeleni ngokuphelele.
Isilinganiso esivulekile - Ivula ibhekwe ngokuba nephikseli yokulandelela efakwe ku-imeyili ngayinye ethunyelwe. Njengoba amaklayenti amaningi e-imeyili evimba izithombe, khumbula ukuthi isilinganiso sakho seqiniso esivulekile sizohlala siphezulu kakhulu kunezinga langempela elivulekile olibonayo ku-imeyili yakho analytics. Amathrendi esilinganiso esivulekile abalulekile ukuwabuka ngoba akhomba ukuthi ubhala kahle kangakanani imigqa yezihloko nokuthi okuqukethwe kwakho kubaluleke kangakanani kobhalisile.
Chofoza ukukala - Ufuna abantu benzeni ngama-imeyili akho? Ukuhambela emuva kokushayela kusayithi lakho (ngethemba) isu eliyisisekelo lemikhankaso yakho yokuthengisa ye-imeyili. Ukuqinisekisa ukuthi unezindlela zokubiza ezinamandla kuma-imeyili akho futhi uthuthukisa lezo zixhumanisi kahle kufanele zifakwe kumasu wokuqamba nokwenza okuqukethwe.
Chofoza ukuze uvule isilinganiso - (CTO noma i-CTOR) Kubantu abavule i-imeyili yakho, bekuyini isilinganiso sokuchofoza? Kubalwa ngokuthatha inani lababhalisile abahlukile abachofoze emkhankasweni bese bewuhlukanisa ngenani eliyingqayizivele lababhalisile abavule i-imeyili. Le yimethrikhi ebalulekile ngoba ilinganisa ukubandakanyeka nomkhankaso ngamunye.
Isilinganiso sokuguqulwa - Ngakho-ke ubathole ukuthi bachofoze, ngabe baguqukile ngempela? Ukulandelwa kokuguqulwa kuyisici sabahlinzeki abaningi be-imeyili abangasizakalanga njengoba kufanele kube njalo. Imvamisa idinga amazwibela ekhodi ekhasini lakho lokuqinisekisa ukuze ubhalise, ulande, noma uthenge. Ukulandelwa kokuguqulwa kudlulisa imininingwane ku-imeyili yakho analytics ukuthi empeleni uqedile ukwenza ukubizelwa esenzweni okuphakanyiswe ngaphakathi kwe-imeyili.
Isilinganiso Esivulekile Seselula - Lokhu kukhulu kakhulu kulezi zinsuku… ku-B2B iningi lama-imeyili akho liyavulwa kuselula. Lokhu kusho ukuthi kufanele unake ngokukhethekile ukuthi i- your imigqa yezihloko yakhiwe futhi uqinisekise ukuthi usebenzisa ukwakheka kwe-imeyili okuphendulayo ukuze ibukwe kahle futhi ithuthukise amanani avulekile nokuchofozwa jikelele.
Inani Lama-oda - (AOV) Ekugcineni, ukulandelela ikheli le-imeyili kusuka kokubhalisile, ngokukhulisa, ukudlulela ekuguqukeni kubalulekile njengoba ulinganisa ukusebenza kwemikhankaso yakho ye-imeyili. Ngenkathi amazinga wokuguqulwa engahlala ehambisanayo, inani lababhalisi bemali abasetshenzisiwe lingahluka kancane.
Tags: I-AOVinani le-oda elijwayelekileuhlu lwabantu abamnyamaizinga lokunciphisaisilinganiso sokuchofoza ukuze uvuleizinga lokuguqulwactoktorukuhanjiswauhlu lokuvimbela i-imeyiliamamethrikhi we-imeyiliidumela le-imeyiliamaphesenti ebhokisi lokungenayoukugcinwa kohluisilinganiso esivulekileidumela lomthumeliizikhalazo zogaxekileimibiko yogaxekile